Depiote Jean Michel Henri : Mampiady ny mponina any Androy -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote Jean Michel Henri : Mampiady ny mponina any Androy
07/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy maty voalavo an-kibo ny solombavambahoaka lany tao Androy amin’ny anaran’ny Mapar, izay zatra nikirakira sy naka ny volam-bahoaka, fony izy kestera tao amin’ny antenimieram-pirenena tsiahivina ilay raharaha nahaverezana vola 4 lavitrisa Ariary. Ankehitriny dia ny any amin’ny tany niaviana indray no tiany hokorontanina, ka ambarany fa misy ny mpitondra any Androy no mangalatra ny volam-bahoaka. Tsiahivina ny fanazavana izay noentiny teo anivon’ny haino aman-jerim-panjakana, fa misy ny fangalarana vola hoentina hanamboarana ny “tribune” ao amin’ny kianjan’ Andalambalo any Androy ary nirodana sahady ny fotodrafitrasa. Tsy izay mihitsy anefa ny zava- misy satria taorian’ny fitsirihana sy ny kajy nataon’ny injeniera hahamafy orina ny fanorenana , dia nisy ny fanitsiana ka voatery nirosoana ny fandrodanana. Tsiahivina mantsy fa efa nisy ny fanamboarana nandritra ny tetezamita saingy nirodana hatrany ity fotodrafitrasa ity. Mba tsy ho kitoatoa kosa ny asa dia nisy io fanitsiana io. Izay vaovao izay rahateo no norirotin’io solombavam-bahoaka Mapar io nampiadiana ny mponina sy hanaratsiana ny mpitantana ao Androy hoy hatrany ny tatitry ny vahoaka avy any an-toerana . Vokany dia tezitra sy sorena amin’ity solombavambahoaka ity avokoa ireo olobe any an-toerana noho ny lainga sy fampiadiana tiany hatao.
Nandritra ny tetezamita dia havan’ity solombavambahoaka izay kesiera tao amin’ny kongresy ny tetezamita ity avokoa no nahazo ny fanatanterahana ny asa na ny “marché” tao amin’ny faritra Androy, ary voatery nijery asa ivelan’ny tanàna ireo orinasa hafa. Anisan’izany ohatra izao ny fanamboaran’ny zanak’ity depiote ity ny toeran’ny mpijery baolina na ny “gradin” tao amin’ny kianjan’Andaboy, izay efa nirodana tsy misy raisina amin’ izao fotoana izao satria dia vovoka no nataony tao amin’ny fanambaniny. Nahazo ny asa fanamboarana tao amin’io toerana izay asiana fanamboarana amin’ izao fotoana ao Andalambolo io ihany koa ny zaodahin’ a/toa solombavambahoaka Jean Michel Henri saingy nianjera izany ka io mandeha io ny asa fanarenana. Raha zohina izany dia misy ny alahelo amin’ny tsy fahazoan’ny havan’ ingahy solombavambahoaka asa ao an-toerana, izao fanakorontanana ataony izao. Ireto farany rahateo izay tsy nahazo asa intsony satria taty amin’ny fidirana amin’ny repoblika fahaefatra dia efa hita sy tazana ny asa tsy manjary notanterahin’izy ireo ary foana teo ihany koa ny kinamanamana sy havakavana.
Noho izany kitoatoa sy gaboraraka ary fangalarana volam-bahoaka nandritra ny tetezamita izany, dia voatery ny fitondram-panjakana ankehitriny no manao ny asa fanarenana ho an’ny tombontsoan’ ny vahoaka. Io asa fanarenana noho ny kitoatoa nataon’ny havan’ny solombavambahoaka io anefa, dia ezahin’ny mpitondra fanjakana avy any ifotony sy ny fanjakana foibe hotanterahina alohan’ny fetin’ny 26 jona ho avy izao. Noho ireo rehetra ireo dia nilaza ny mponina avy any an-toerana fa hitsangana izy ireo hiaro ny fananany, ary hanohitra ihany koa ny fitsetsefana ataon’ireo olona mangalatra ny fananam-bahoaka. Fa manoloana ity zava- mitranga any amin’ny faritra Androy ity dia mampanontany tena ihany hoe aiza ny IGE sy ny Bainco satria dia efa hita mazava araka ny tatitra ataon’ny vahoaka any an-toerana ny halatra bevava nataon’ny havan’ny solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny Mapar tamin’ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa izay efa nirodana ireo. Sa ve dia havela handalo fotsiny ihany izany, ka ho sasatry ny hanarina ny kitoatoa nataon’ny hafa ny fanjakana ankehitriny?